LEGO အသစ်တွင်ကြီးမားသော LEGO Ferrari ဆုအစုအဝေးကိုရယူပါ Ideas ပြိုင်ပွဲ
01 / 12 / 2020 15 / 12 / 2020 ဂျက်ယက်စ် 889 Views စာ0မှတ်ချက် 42116 Skid စတီယာရင် Loader ကို, 42117 လူမျိုးလေယာဉ်, 42118 နဂါး Jam သင်္ချိုင်းတွင်းတူး, 42119 နဂါး Jam Max-D ကို, 42124 Off- လမ်း Buggy, 42125 Ferrari 488 GTE AF Corse # 51, 75890 Ferrari F40 ပြိုင်ဆိုင်မှု, 76895 Ferrari F8 Tributo, Ferrari ပြိုင်ကား, Lego, Lego Ideas, Lego Ideas ပြိုင်ပွဲ, Lego Speed Champions, Lego Technic, Speed Champions, နည်းပညာ
Lego Ideas ကြီးမားကျယ်ပြနှင့်အတူအသစ်တခုပြိုင်ပွဲစတင်ခဲ့သည် Lego အသစ်က Ferrari ပြိုင်ကားအစုအဝေး 42125 Ferrari 488 GTE AF Corse # 51 အနိုင်ရခံရဖို့။
အဆိုပါအသစ် Lego Ideas ပြိုင်ပွဲကပရိသတ်များအတွက် Ferrari ပိုစတာကိုဒီဇိုင်းဆွဲရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည် 42125 Ferrari 488 GTE AF Corse # 51. အစုံမကြာသေးမီကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည် နှင့်ဆင်နွှဲရန်, Lego Ideas ဒီပြိုင်ပွဲကိုလက်ခံခြင်းနှင့်ကြီးမားတဲ့ကွာပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် Lego Ferrari ပြိုင်ပွဲ။
အောက်ဖော်ပြပါပုံများကို သုံး၍ အသစ်အတွက်အံ့သြဖွယ်ပိုစတာတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်သည် နည်းပညာ Ferrari 488 GTE? အချိန်ကာလ၏စမ်းသပ်မှုကိုခံရပ်နိုင်မည့်အရာ၊ ကလေးများသည်သူတို့၏အိပ်ခန်းနံရံများပေါ်တွင်ကပ်ထားသောအရာများဖြစ်သည်။ ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုထဲမှာပြသလိမ့်မည် art ပြခန်း!
Lego Ideas ဤပြိုင်ပွဲနှင့်ပက်သက်ပြီးပရိတ်သတ်များအားပေးထားသည့်ရုပ်ပုံများကိုတင်းပလိတ်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုရန်တောင်းဆိုသည်။ စည်းကမ်းချက်များကိုမချိုးဖောက်သရွေ့ပိုစတာများသည်ပုံ၏ထိပ်ပိုင်းရှိမည်သည့်တည်းဖြတ်မှုသို့မဟုတ်ဒီဇိုင်းကိုမဆိုသုံးနိုင်သည်။ သို့သော်လက်တွေ့ဘ ၀ ကားများ၏ဓာတ်ပုံများကိုခွင့်မပြုပါ။
ပြိုင်ပွဲများအတွက်ဆုအထင်ကြီးဖြစ်ကြပြီးပါဝင်သည် အသစ်ထုတ်ဖော်ပြသ 42125 Ferrari 488 GTE AF Corse # 51 အစုံ အောင်မြင်သူတစ် ဦး သည်အောက်ပါတို့နှင့်အတူထွက်သွားလိမ့်မည်။
42125 Ferrari 488 GTA Corse # 51
75890 Ferrari F40 ပြိုင်ဆိုင်မှု
၂ x အနိုင်ရပိုစတာ၏ပုံနှိပ်ခြင်း (လက်မှတ်ထိုး ၁ ခုနှင့်လွင်ပြင်တစ်ခု)
ထို့နောက်အပြေးသမားနှစ်ယောက်ရရှိမည်ဖြစ်သည် 42125 Ferrari 488 GTE AF Corse # 51, 42116 Skid စတီယာရင် Loader ကို, 42117 လူမျိုးလေယာဉ်, 42118 နဂါး Jam သင်္ချိုင်းတွင်းတူး နှင့် 42119 နဂါး Jam Max-D ကို.
Lego Ideas လက်ရှိတွင်ကအပါအဝင်အခြားပြိုင်ပွဲအတော်များများ hosting ဖြစ်ပါတယ် Ghostbustersနှင့် လမ်းပြမြေပုံ စက်ရုပ်ပြိုင်ပွဲ.
← LEGO DUPLO ဗားရှင်းကိုတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်ငါးနှစ်အရွယ်ကတိရစ္ဆာန်ရုံထောင်ပေါင်းများစွာကိုမြှင့်တင်ခဲ့သည်
Lego 75279 Star Wars Advent Calendar သည်ဒုတိယစျေးကွက်တွင်ဈေးတက်နေသည် →